Netflix, Disney +, horonan-tsary Apple TV + ary Prime: tonga tamin'ny Aogositra 2020 ny sary novokarin'ny SVoD - teles relay
Netflix, Disney +, Apple TV + ary horonantsary Perdana: ny atrikasa SVoD dia tonga tamin'ny Aogositra 2020
Atao tanteraka ny fahavaratra ary sehatra votoaty horonantsary dia toa mihazona fahatsapana malefaka kokoa amnio Aogositra.
Taorian'ny volana sarotra, ary na dia ny fahasarotana maro kokoa aza mandalo amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao, Netflix, Amazon, Apple ary Disney dia mifidy amin'ity volana ity amin'ny fiverenan'ny soatoavina azo antoka sy ny haino aman-jiro vitsivitsy, mba hialana amin'ny rivotra. Saingy ny toetr'andro politika tsy miovaova dia mikendry ihany koa amin'ny sehatra hanapariahana ireo dokambarotra manamaivana ny zava-misy eto an-tany.
Herin'ny tetikasa - Netflix
Inona no mety ho tsara kokoa noho ny tantara mahery vaika namboarin'i Jamie Foxx miala sasatra eo anoloan'ny fahitalavitra? "tsy misy», Toa hamaly anay Netflix, izay misoratra anarana Herin'ny tetikasa sarimihetsika iray amina confluence ny karazany.
Rehefa misy takelaka miafina manome ny olona izay misisika azy ireo dia mahery ny zava-dehibe any New Orleans, dia misy ekipa iray (Joseh Gordon-Levitt) miaraka amin'ny mpivarotra zava-mahadomelina (Dominique Fishback) ary vazaha (Jamie Foxx). ny fomba fiasa amin'ity karazana zava-mahadomelina vaovao ity.
Herin'ny tetikasa, azo jerena ao amin'ny Netflix 14 Aogositra.
Etazonia, Tanin'ny fifindra-monina - Netflix
Andian-tsoratra politika sy ankehitriny Etazonia, Tanin'ny fifindra-monina manangona ny telo taona fanadihadiana nataon'ny talen'ny Shaul Schwarz sy Christina Clusiau ireo manampahefana mifindra monina, polisy an'ny sisintany ary ireo mpitaky ny fahazoan-dàlana amerikana.
Amin'ny firenena iray indray dia mikorontana indray noho ny olana momba ny maha-izy azy, ary ny nofinofisin'ny Amerikanina dia nesorina tamin'ny fitondrana iray izay mandroso "ireo manohitra anay», Ity horonantsary fanadihadiana amin'ny andiany enina ity dia manandrana fahitana mangidy amin'ny toe-javatra amerikana. Tsy hadinony ny mahatadidy fa ny firenena dia naorina tsara amin'ny fiaviana maro samihafa nataon'ny mpisava lalana.
Etazonia, Tanin'ny fifindra-monina, azo jerena ao amin'ny Netflix 3 Aogositra.
Zazalahy - Apple TV +
Nizara ny A24 faran'izay maranitra, ity horonantsary nosoniavin'i Jesse Moss sy Amanda McBaine ity dia milaza ny foto-kevitry ny demokrasia amin'ny alàlan'ny fivavahan'ny tanora Texan 1 100 izay, isan-taona, dia asaina hanangana governemanta avy amin'ny pejy tsy misy.
Fifaninanana mafana, izay iray ihany no hivoaka handresy, ary ho lasa governemantan'ny fanjakany.
Nisy horonantsary fanadihadiana iray nanolotra ny loka lehiben'ny mpitsara nandritra ny Fetiben'ny Sundance malaza tany Etazonia.
Firenena lahy, hita amin'ny Apple TV + amin'ny 14 Aogositra.
Amin'ity andian-tantara ho an'ny olon-dehibe ity, nisy mpanazatra basikety nahita ny tenany teo an-dohan'ny ekipa mahatsiravina iray izay nanandrany ny tenany ho eo an-tampony. Fomba iray ho an'ny mpilalao nolalaovin'i Jake Johnson (New Girl) mahazo aina indray sy mifehy ny fiainany.
Hoops, vanim-potoana 1 hita ao amin'ny Netflix ny 21 Aogositra.
Kimmy Schmidt tsy mety vaky: Kimmy vs. Ny Reverend - Netflix
Taorian'ny fanemorana kely ny fanairana (efa nandrasana ny volana mey lasa teo) ity andrana ifampiresahana ity Bandersnatch dia manolotra ny tenany ho fanafody fanampiny ho an'ireo mpankafy amin'ny vanim-potoana efatra amin'ny andiany Tina Fey.
Kimmy Schmidt tsy mety vaky: Kimmy vs. Ny Reverend, azo ampiasaina ny 5 Aogositra ao amin'ny Netflix.
Ny Avana (Vanim-potoana 3) - Netflix
Toy ny mangatsiaka antsika amin'ny hafanana amin'ny fahavaratra, ny Netflix no hanolotra ny andiany Danemark The Rain vanim-potoana farany amin'ny volana Aogositra.
Taorian'ny oram-be nivatravatra nandroaka ny mponina tao Scandinaviana dia tanora roa no nifanenjika izay lalana tokony hanamboarana ny fiaraha-monina.
The Rain, vanim-potoana farany azo jerena ao amin'ny Netflix ny 6 aogositra.
Mandalo ny votoatiny vaovao tany am-boalohany amin'ity volana ity, Disney + dia hanampy ny fametrahana fanintelony fahatelo sy farany amin'ny trilogy amin'ny katalaony Tantara ao Narnia: Ilay Dread Treader Odyssey.
Mbola amin'ny lohahevitry ny mahery fo, Disney + ihany koa no hampiantrano ny vanim-potoana telo voalohany amin'ny andiany Indray andro hono eo amin'ny lampihazo.
Tantara ao Narnia, ny trilogy azo jerena ao amin'ny Disney + amin'ny 7 aogositra.
3% (Vanim-potoana 4) - Netflix
rehefa The Rain, fanaovam-beloma hafa indray izay hataon'ny Netflix amin'ny Aogositra. Hifarana eo amin'ny vanim-potoana fahefatra sy farany ny andiany thriller breziliana, izay lohahevitry ny fizarana The Screen Watch.
3%, vanim-potoana farany azo alaina ao amin'ny Netflix 14 Aogositra.
Biohackers (vanim-potoana 1) - Netflix
Amin'ity andiany vaovao Alemanina ity, tanora mpianatra an-tongotra ho an'ny olona tompon'andraikitra amin'ny loza ara-pianakaviana dia mahita fa tafiditra ao anaty vondrona iray mitady ny hisolo tena an'Andriamanitra izy amin'ny alàlan'ny fanandramana génétika.
Sarinà teknolojia mahomby izay mahomby, izay mandinika ireo lohahevitra mifandraika amin'ny bioethika.
Biohackers, vanim-potoana 1 hita ao amin'ny Netflix ny 20 Aogositra.
Fifadian-kanina sy fahatezerana 8 - Netflix
Farany, satria mety tsy ho afaka hankafy ny trano fisakafoanana amin'ny sinema isika amin'ity fahavaratra ity, manampy i Netflix ao amin'ny kataliny ny fizarana maimaimpoana momba ny angano. Fast sy Furious.
Ampy izay hanavaozana ny fahaizanao mekanika alohan'ny hiaingan'ny mendrika ny fialan-tsasatra mendrika.
Fast ary tezitra 8, azo jerena ao amin'ny Netflix 16 Aogositra.
Ary ianao, film, series na documentary no iandrandranao indrindra ny volana aogositra 2020?
Soisa: i Jean-Pierre Nsamé dia namoaka ny tanjony faha-30 tamin'ny vanim-potoana ary nifanaraka tamin'ny firaketan'ny Ligy
Tech: Ny maodely mpanamboatra 4 tsara indrindra amin'ny 2020